Gaa njem na Saudi Arabia maka njem nlegharị anya ma ọ bụrụ na ị gbaa ọgwụ mgbochi ọrịa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » trending Ugbu a » Gaa Saudi Arabia maka njem nleta ma ọ bụrụ na ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa
Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ okomoko • News • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Gaa Saudi Arabia maka njem nleta ma ọ bụrụ na ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa
Saudi Arabia ga -emepe ndị njem mba ofesi malite na 1 Ọgọst 2021. Ndị ọbịa si mba iri anọ na itoolu ga -enwe ike inyocha alaeze Saudi Arabia, ma ọ bụrụ na a gbaa ha ọgwụ mgbochi nke ọma.
Saudi Arabia belatara mgbochi ókèala na-esochi mkpọchi COVID-19 zuru ụwa ọnụ.
Citizensmụ amaala sitere na mba 49 tozuru oke maka e-visa njem.
Ndị otu njem nlegharị anya ụwa kelere alaeze ahụ maka imepe ọnụ ụzọ mba ụwa nke ndị njem mba ofesi.
Saudi Arabia na -etinye ego ijeri ijeri ugbu a na njem njem na njem nlegharị anya, ọ bụghị naanị maka Saudi Arabia kama ka ọ bụrụ ebe zuru ụwa ọnụ maka ndị isi ndị njem ga -ezukọta ma setịpụ usoro.
Dị ka Ọgọst 1, ntinye ego a ga -amalite iwepụta ego ọzọ maka Alaeze ahụ, mgbe a na -akpọ ụmụ amaala si mba 49 ka ha bịa leta ụwa ọhụrụ.
Na mkparịta ụka na nso nso a nke akwụkwọ a haziri na Isi nke Saudi Arabia nke World Tourism Network.
Onye isi ala ya bụ Dr. Abdulaziz Bin Naser Al Saud, onye isi oche nke WTN Saudi Arabia Chapter, rụtụrụ aka na Saudi Arabia na -akwado ndị isi njem na njem nlegharị anya na atụmatụ, gụnyere World Tourism Organisation (UNWTO), World Travel and Tourism Council (WTTC), na Resilience Tourism Resilience na Center Management Crisis (GTRCMC).
Ọnọdụ: Ndị ọbịa chọrọ ịga alaeze Saudi Arabia kwesịrị ịgba ọgwụ mgbochi ọ bụla.
Ndị jidere visa njem nlegharị anya nke gbara ọgwụ mgbochi COVID-19 ga-enwe ike ịbanye obodo ahụ site na Ọgọst 1, 2021, na-enweghị mkpa ịpụ iche. Ndị njem ga -enyerịrị ihe akaebe nke usoro zuru oke nke otu n'ime ọgwụ mgbochi anọ a matara ugbu a: usoro abụọ nke ọgwụ Oxford/Astra Zeneca, Pfizer/BioNTech, ma ọ bụ Moderna ma ọ bụ otu ọgwụ mgbochi nke Johnson & Johnson mepụtara.
A ga -anabata ndị njem nke mechara ọgwụ mgbochi Sinopharm ma ọ bụ Sinovac abụọ ma ọ bụrụ na ha anata ọgwụ ọzọ nke otu n'ime ọgwụ mgbochi anọ akwadoro n'Alaeze.
Saudi Arabia emepela ọnụ ụzọ weebụ na https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home maka ndị ọbịa ka ha deba aha ọkwa ịgba ọgwụ mgbochi ha. Ebe ahụ dị na Arabic na Bekee.
Iji nabata ndị njem, Saudi akwalitela Tawakkalna, usoro mmeri nke mba ahụ, yana ngwa trace, ka ndị ọbịa nwa oge debanye aha na nkọwa paspọtụ ha. A chọrọ Tawwakalna maka ịbanye n'ọtụtụ ebe ọha na Saudi, gụnyere nnukwu ụlọ ahịa, sinima, ụlọ nri, na ebe ntụrụndụ.
Nkwuputa a na-abịa ihe fọrọ nke nta ka ọnwa iri na asatọ ka a kwụsịtụrụ njem njem mba ofesi na Saudi Arabia n'ihi ọrịa COVID-19. Saudi Arabia bidoro mmemme e-visa ndị njem na Septemba 2019.
Fahd Hamidaddin, onye isi oche nke Saudi Tourism Authority (STA) kwuru, "Saudi na -atụ anya imepe ụzọ ya na obi ya nye ndị ọbịa mba ofesi. “N'oge mmechi ahụ, anyị na ndị mmekọ anyị na ngalaba ọha na nkeonwe na -arụkọ ọrụ ọnụ iji hụ na ndị ọbịa na Saudi nwere ike ịnụ ụtọ ihe echefuru echefu, nke kachasị, na karịa, ahụmịhe nchekwa maka onwe ha na ndị ha hụrụ n'anya. Ndị ọbịa ga-achọ saịtị ihe nketa a na-akọwaghị, ezigbo ahụmịhe ọdịbendị, na ịma mma eke na-eku ume ga-eju anya ma nwee obi ụtọ ịhụ nnabata nnabata Saudi.
Nkwuputa banyere ịmalite njem njem na -abịa ka Saudi na -ebido mkpọsa oge ọkọchị nke 2021, na -ewetara mba ahụ ọtụtụ ihe nkiri na ihe omume ọhụrụ. A na-atụ anya na mkpọsa ọhụrụ a ga-enweta nnukwu mkpa dị n'etiti ndị bi n'ime ụlọ na mpaghara, ọkachasị maka ihe omume ntụrụndụ buru ibu, nke usoro metụtara ịchịkwa mgbasa nke coronavirus emetụtala ya nke ukwuu.
Ụlọ na okporo ụzọ Jeddah Old City, Saudi Arabia
N'agbanyeghị ọrịa na -efe efe, 2020 bụ afọ mebiri maka ụlọ ọrụ njem nlegharị anya nke Saudi ka ụmụ amaala na ndị bi na -enyocha obodo ahụ - ọtụtụ maka oge mbụ - na -enyere aka na -aga n'ihu na -eme ihe na ngwaahịa ọhụrụ n'ihu ịmalitegharị mba ụwa.
Mgbasa ozi oge okpomọkụ nke Saudi Arabia nke 2020, nke malitere n'agbata June na Septemba, butere mmụba 33% na mmefu na ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ, ụlọ oriri na ọ recreụ ,ụ, na ihe omume ọdịnala ma e jiri ya tụnyere otu oge na 2019. Nkezi ụlọ nkwari akụ nọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 50%, yana ọnụ ọgụgụ kacha elu maka ụfọdụ ebe ọ fọrọ obere ka ọ bụrụ 100%.
Saudi Arabia webatara onyinye ụgbọ mmiri ezumike mbụ nke mba ahụ n'akụkụ Oké Osimiri Uhie n'ụgbọ mmiri Silver Spirit, na Septemba 2020. A na-enyekwa ụgbọ mmiri ọzọ dị ka akụkụ nke oge ọkọchị, yana MSC Belissima na-arụ ọrụ na Jeddah n'etiti July na Septemba.
Usoro usoro ahụike na nchekwa yana nyocha mba niile maka COVID-19 hụrụ na mmụba nke njem nlegharị anya esoghị na mmụba n'okwu ikpe coronavirus. Saudi edeela ntakịrị ihe karịrị ọrịa coronavirus 14,700 n'ime nde mmadụ niile, n'okpuru nkezi nke ikpe 25,153 kwa nde na nke ukwuu n'okpuru ọtụtụ ebe njem nlegharị anya ụwa.
Saudi Arabia ewepụtala ọgwụ mgbochi COVID-19 nye ụmụ amaala niile na ndị bi na ya, na-enye ihe karịrị nde ọgwụ iri abụọ na ise ka ọnwa 25 nke ọnwa Julaị. Ihe karịrị ọkara nke ụmụ amaala Saudi na ndị bi ebe ahụ enwetala ọgwụ mbụ ha na otu ma ọ bụrụ na ise anata ọgwụ mgbochi abụọ.
A ga -agwa ndị ọbịa niile ka ha debe usoro mgbochi nke Ministri Ahụike kwadoro nke gụnyere itinye nkpuchi n'ihu ọha yana idobe anya na -elekọta mmadụ.
Citizensmụ amaala sitere na mba 49 tozuru oke maka visa njem, nke enwere ike ịchekwa na mbata Gaa na webụsaịtị Saudi. Maka ozi kacha ọhụrụ maka ihe mbata, ọkachasị site na mba nwere coronavirus ọhụrụ, ndị njem kwesịrị ịlele onye na-ebu ha tupu ha edee akwụkwọ.